မြန်မာ့ကျန်းမာရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် ကောင်းမွန်မှု မရှိပေ။ စစ်အစိုးရသည်နိုင်ငံ့ဂျီဒီပီ (GDP) ကို ၀.၅ % မှ ၃% အထိသာ ကျန်းမာရေးအတွက် သုံးစွဲသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနိမ့်ကျသည့် နိုင်ငံများတွင် မပြောင်းမလဲ တစ်သမတ်တည်း ရှိခဲ့သည်။
၂.၁ မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှာက်မှု
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးပညာတက္ကသိုလ် ၆ ခု ရှိသည်။ ငါးခုသည် အရပ်ဘက်အတွက်ဖြစ်ပြီး တစ်ခုသည် တပ်မတော်အတွက် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအားလုံးကို အစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာကောင်စီက လုပ်ဆောင်သည်။ တက္ကသိုလ်များမှာ -
၁။ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်
၂။ ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန်
၄။ ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)
၅။ ဆေးတက္ကသိုလ် (မကွေး)
၆။ ဆေးတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး)
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အိုကာယာမာတက္ကသိုလ်သည် (Okayama University) နိုင်ငံအတွင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကယ်ဒမီတစ်ခု တည်ထောင်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အစမ်းအနေဖြင့် Rinsho အကယ်ဒမီ ဟု အမည်ပေးထားသည်။ ထိုအကယ်ဒမီသည် နိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားသားများဖြင့် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းဖြစ်သည်။ 
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မိခင်များသေဆုံးမှုနှုန်းသည် မွေးဖွားမှု ၁၀၀၀၀၀ တွင် ၂၄၀ ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်မူ ၂၁၈.၃ ရှိပြီး၊ ၁၉၉၀ တွင် ၆၆၂ ရှိခဲ့သည်။ ၅ နှစ်အောက်ကလေး သေဆုံးမှုသည် ၁၀၀၀ ကို ၇၃ ဖြစ်သည်။ မွေးကင်းစများ သေဆုံးမှုသည် ၄၇ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝမ်းဆွဲအရေအတွက်သည် ၁၀၀၀ လျှင် ၉ ယောက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိအမျိုးသမီး သေဆုံးမှုသည် ၁၈၀ လျှင် ၁ ယောက် ဖြစ်သည်။ 
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းသည် တရားမဝင်ပေ။ မိခင်များ သေဆုံးမှုသည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်ကတည်းက လျော့ကျခဲ့သော်လည်း တရားမဝင်ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချနေမှုကြောင့် သေဆုံးမှုသည် မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ 
HIV/AIDS သည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့် လိင်လုပ်သားများတွင် အဖြစ်များသည်။ မြန်မာ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံဆောင်ရွက်လျက် ရှိ၏။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အရွယ်ရောက်သူများတွင် HIV ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည် ၁.၃% (၂၀၀၀၀၀ - ၅၇၀၀၀၀) ရှိသည်။ UNAIDS နှင့် အစောပိုင်းဖော်ပြချက်များအရ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည် သတိထားရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကူးစက်မှုသည် တိုးပွားမြဲတိုးပွားလျက် ရှိခဲ့သည်။  မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား AIDS လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိင်လုပ်သား ၃၂% နှင့် အကြောအတွင်းထိုးသွင်းသည့် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ ၄၃% သည် HIV ရောဂါ ရှိနေကြသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ 
အစိုးရသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၇၁၂၀ (၁၅၀၈၃၁၆၀၀ ကျပ်) ကို HIV ရောဂါအတွက် သုံးစွဲခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလှူရှင်များ (နော်ဝေ၊ နယ်သာလန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဆွီဒင် အစရှိသည့်နိုင်ငံ့အစိုးရများ) ကလည်း HIV အစီအစဉ်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၇၁၁၈၁၃ တန်ဖိုး လှူဒါန်းခဲ့သည်။  မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတိုက်တွင် အရွယ်ရောက်သူများ HIV ရောဂါကူးစက်ခံရမှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၆ နိုင်ငံတွင် အဆင့် ၅၁ ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်တွင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်း တို့က ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးအဖြစ် တည်ရှိသည်။ နှစ်ပတ်လည်တွင် HIV/AIDS ကြောင့် သေဆုံးသူသည် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀၀၀ (၁၁၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀ အတွင်း) ရှိသည်။ 
↑ "PPI: Almost Half of All World Health Spending is in the United States"၊ 17 January 2007။ Archived from the original on5February 2008။
↑ Yasmin Anwar။ "Burma junta faulted for rampant diseases"၊ UC Berkeley News၊ 28 June 2007။
↑ Tsujita၊ Hideki။ "Okayama University extends hand to Myanmar"၊ The Daily Yomiuri၊ 18 March 2012။ 17 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The State Of The World's Midwifery။ United Nations Population Fund။ August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Abortion: A public health problem in Myanmar" (May 1997). Reproductive Health Matters5(9): 94–100. doi:10.1016/s0968-8080(97)90010-0. Retrieved on 15 September 2015.
↑ Ataglance: Myanmar - statistics။ UNICEF။ 1 September 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9January 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ A scaled-up response to AIDS in Asia and the Pacific (PDF)။ UNAIDS (1 July 2005)။ 23 February 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 January 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Asia (PDF)။ UNAIDS (December 2006)။ 16 January 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9January 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fund for HIV/AIDS in Myanmar - Annual Progress Report (PDF)။ UNAIDS (1 April 2005)။ 23 February 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9January 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar: Epidemiological Fact Sheets (PDF)။ UNAIDS (2004)။ 23 February 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 January 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာ့ကျန်းမာရေး&oldid=719300" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။